10 Bandhigyada Anime ee hoosta laga xariiqay Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato - Kale
10 Bandhigyada Anime ee hoosta laga xariiqay Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Waa kuwan taxanayaashayda 10-ka ah ee ugu sarreeya ee aan lahayn soo-gaadhis ku filan sida kuwa caadiga ah ee umuuqda inay ku socdaan warshadaha.
Tixraacyadan anime-ka ah ayaa mudan in la daawado waxaana laga yaabaa inay ku siiso dhadhan kale haddii aad ku mashquushay daawashada kaliya kuwa ugu caansan.
1. Elfen Been sheegay
Aniga f dhiig iyo cirridku maaha wax adiga ah, markaa waa inaad si isku mid ah u fariisataa midkaan.
Elfen Lied mar kale waa sheeko-fiidiyo-fiisi ah oo ku saleysan nooc ka mid ah homo-sapiens-ka loo yaqaan 'Diclonius'.
Diclonius-ku wuxuu leeyahay awood maskaxeed aan caadi aheyn oo loo yaqaan 'vector', oo baabi'isa oo ciribtira wax kasta oo ku dhaca habka Lucy, oo sidaas darteed kuwa iyada jecel.
Lucy waa halyeeyo naxdin leh.
Khuseeya: Kuwani 11 Characters Anime waxay leeyihiin qaar ka mid ah maraakiibta ugu murugada badan ee qalbi jabin doona
Mushishi anime wuxuu ku saleysan yahay taxanaha manga ee uu qoray oo uu sawiray Yuki Urushibara, oo lagu daabacay joornaalka galab ee Kodansha laga bilaabo Janaayo 1999 ilaa Ogosto 2008.
Mushishi wuxuu diiradda saarayaa xiisaha sayidkiisa Mushi, Ginko, oo kolba meel u safraya, isagoo eryanaya wararka xanta ah ee dhacdooyinka ku xirnaan kara Mushi.
Anime waa mid dahsoon oo leh muuqaal ka duwan kii hore.
La xiriira: 25 Gabdhaha Anime ee ugu Fiican ee Timo Cad
Waxaa laga soo qaatay buugaagta iftiinka abaalmarinta ee magaca isku midka ah, Baccano!
Waxay raacdaa dhacdooyin badan oo markii hore u muuqda kuwo aan xiriir la lahayn, laakiin waa sheeko ka weyn sheeko. Mid ka mid ah alchemy, badbaado, iyo dhiman.
Isku soo wada duub dhacdooyinkan waa kuwa qalbiga qalbiga ka fikiraya: - Isaaq iyo Miria.
Dabeecad kastaa waxay leedahay himilooyin iyo ajendayaal qarsoon oo iyaga u gaar ah, oo abuuraya isku xirnaan cimri dheer iyo cawaaqib qof kasta oo ku lug leh.
4. Jojo’s Adventis-kii Ugu Layaabka Badnaa
Anime-kani waa mid heer sare ah oo gebi ahaanba yaab leh sida cinwaanku tilmaamayo.
Adiga waa in akhri shaati sidoo kale haddii aad awoodid, - si isku mid ah ayaa maskaxdaadu u fududaan doontaa.
Taxanaha waxaa loo jilciyey 8 goob sidaas darteed taasi waa mid horeyba ula yaab leh bilowga ku fidsan xaq u 1992 ilaa Jojolion sheeko arch ka 2011-joogo.
Anime-ku wuxuu gaadhay oo keliya illaa goobtii / sheeko-xariirkii saddexaad iyo xilli la yiraahdo Dheemman lama jabin karo.
Khuseeya: 40+ Xigasho Waxaad U Baahan Tahay Inaad Aragto Haddii Aad Jeceshahay Adventure Bizarre Adventure
5. Masiir / Eber
Anime ka soo jeeda taxanaha fiidiyowga-fiidiyowga Japan ee Masiirka, Qaddarka / Zero wuxuu raacaa sheekada isku midka ah ee ciyaarta marka laga reebo jilayaal dheeri ah.
Muuqaalada dagaalka maskaxda ku dhaca, animation-ka wanaagsan iyo qalloocyada cajiibka ah ee ku dhex jira shirqoolka ayaa ku xeeran kuwa mayalka adag oo isku dayaya inay ku guuleystaan ​​Dagaalkii Quduuska ahaa. #
Mage kasta wuxuu caawimaad ka helaa 'Addoomadooda' - halyeeyada iyo halyeeyada taariikhda sida Arthur iyo Alexander the great.
Anime sidoo kale wuu jabayaa matalaada labka iyo dheddigga
Shirkadda Dhoola Cadeynta Wanaagsan G94021 Sabre Triumphant Excalibur Jaantus Ku adeego Amazon Wax dheeri ah baro Waxaan ka kasbanaa komishan Amazon & shirkadaha kale hadii aad wax ka iibsato adigoon qiimo dheeraad ah kugu fadhiyin.
6. Hel Backers-ka
Waqtiga firaaqada: Hel Backers, labada dabeecadood ee sarraysa ee ku jira sawirka kore ayaa haya maqaallo lumay iyo farshaxanno u ah macaamiishiisa.
Waxay si shil ah ugu soo gudbaan qalcad halkaas oo sheekadu ku leex leexato markay la kulmaan oo ay waji ka wajihi doonaan shaqsiyaadka la midka ah ee leh awoodaha hal abuurka ah!
Horumarka dabeecada weyn, qoto dheer, iyo gadaal. Cadowgooda waa lafo-qaboojin.
7. Ergo Wakiil
Tani waa riwaayad khiyaali ah.
Sheekadu waxay ku ciyaareysaa inta lagu jiro utopia halkaas oo aadanaha iyo androids loo yaqaan 'AutoRevis' ay si nabad ah u wada noolaadaan, illaa inta uu ka dilaacayo cudurku.
Tani waxay ku riixaysaa inay ku dhiiradaan isku day dil illaa sarkaal Re-l Mayer soo farageliyo.
Qoryo badan oo qoriga lagu tuuro, waxyaabo madoow, shaki, xiisad iyo tiknoolajiyad.
Khuseeya: 7 Riwaayadaha Anime oo saadaaliyay mustaqbalka isla markaana ka horreeyay wakhtigooda
8. Madoow ka madow
Koofiyadu waa kuu joogi haddii aad horay u aragtay anime - haddii kale, markaa waxaad u baahan tahay.
Anomaly dahsoon oo la yiraahdo Hell’s Gate ayaa ka furmay Tokyo… Hei, the MC, waxaa laga yaabaa inuu yahay “Qandaraasle” Shiine ah, oo leh awood maskaxeed oo daba socota qandaraasleyda kale. Badanaa ka takhalusida maadaama ay ka tirsan yihiin urur dembiyeed loo yaqaan Syndicate.
Dhiig badan, rabshado, iyo daqiiqado madow.
Madoow ka madow marna maahan madadaalo.
Mid ka mid ah anime-ga ugu fiican ee socda oo soo qabta ciidan dhameystiran oo sawir faahfaahsan - sidoo kale sheekadu si siman looma adkaan karto.
Maaddaama ay cusub tahay (nooc ka mid ah), waxaan jeclaan lahaa inaad marka hore madaxa quusato adigoon aqoon hore u lahayn qorshaha.
Manga waa waajib in la akhriyo, sidoo kale!
10. Parasyte: Maximku
Si lama filaan ah, waxay yimaaddaan: shisheeyaha dulinka ah ee ku soo degay Dhulka isla markaana si dhakhso leh u dhex galay bini-aadamka iyagoo ku qulqulaya maskaxda bartilmaameedyada nugul.
Dib u guuri kari waaya, dulinku, oo hadda loogu magac daray Migi, ma laha xulasho aan ka ahayn inuu ku tiirsanaado Shinichi, MC-ka uu ku dhex milmay ka dib markii uu gacantiisa la wareegay.
Parasyte iyo aadanaha labaduba waxay noqdeen hal. Sidaa darteed, labada lamaane ayaa lagu qasbay wada noolaansho aan fiicnayn waana inay iska difaacaan dulinnada cadawtinimada leh ee rajada ka qaba inay tirtiraan halista cusub ee ku soo korortay noocyadooda.
Anime tee hoose oo aad dareento inay ka maqan tahay?
Websaydhka qoraaga: https://animastic24x7.com/
10 Taxane Ah oo Caan ah oo caan ah oo aad ufiican in la iska indhatiro
Malaha Weligaa Ma Maqal 22kan Riwaayadood ee Anime
animes sida kalgacalka franxx